ပဲ့တင်သံတခုရဲ့ ရောင်ပြန်: 2009
မင်းကို ချစ်နေမိတယ် ထင်ရဲ့ကွယ်.....။
ပျံသန်းခွင့် မင်းကို ပေးလိုက်မယ်
Posted by ရောင်ပြန် at 4:38 PM6ပဲ့တင်သံ
Posted by ရောင်ပြန် at 3:30 PM2ပဲ့တင်သံ
ဆုံမှတ်တခု သတ်မှတ်ချင်နေတဲ့ ငါ.....
ငါ တကယ် ရူးခဲ့တာလေ...........။
Posted by ရောင်ပြန် at 2:39 PM4ပဲ့တင်သံ
Posted by ရောင်ပြန် at 3:18 PM 16 ပဲ့တင်သံ
Posted by ရောင်ပြန် at 10:34 AM6ပဲ့တင်သံ
နောက်တ Tag ပြန်ပြီ.. အကိုတော် ကိုဂစ်တာကြီးက တက်ဂ်ထားတာ လေ.. လေးလလောက် ရှိတော့ မယ်.. မေ့နေတာ.. မေ့နေတာ.. (သတိအရမ်း ကောင်းတယ်လေ).. အကိုတော်က ပြန်ပြောမှ ဘုရားရေ သောက်တော်ရေပေါ့... :P :P
အကိုတော်ကတော့ စိတ်ဆိုးလေရဲ့.. အဲလေ စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါလေရဲ့.. သူ့ကို မခင်ဘူးပေါ့.. ဒါနဲ့ မနည်းတောင်း ပန်(စကောပန်) လိုက်ပါတယ်.. ဟုတ်တယ်လေ.. မဲ့နေရင် လှမှမလှပဲ.. :P :P :P... တချိန်ကဒုက္ခ ခုတော့ဟာသတွေကတော့ အများသားပဲ (ပြောချင် လွန်းလို့ စကားစတာ.) .. ဒါပေမယ့် အမှတ်အရဆုံးကိုပဲ ပြောမယ်နော်.. ဟီးဟီး (လေရှည်တာလေ).. ဒီလို.. ဒီလို...
ရောင်ပြန်က အအိပ်မက်တယ်သိလား.... ကျောင်းစာနဲ့ပတ်သက်ရင်ပိုဆိုး.. အိပ်ဆေးစားမိသလိုပဲ.. စာအုပ်နဲ့ မျက်နှာနဲ့အပ်ရင် အိပ်ပျော်ပြီသာမှတ်..။ ဆယ်တန်းရောက်မှ ရောဂါက ပိုဆိုးလာတယ်ပြောရမယ်... (အဲဒီထဲမှာ ၀တ္ထု စာအုပ်တို့ မပါဘူးနော်. :).. )။ ဆယ့်နှစ်ရာသီ အိပ်ငိုက်နေတာပဲ..။ ညဆို7နာရီမထိုးသေးဘူး.. ငိုက်ပြီလေ.. (ဆိုးတယ်နော်).. ညမှမဟုတ်ပါဘူး.. ဘယ် အချိန်ဖြစ်ဖြစ်.. စာအုပ်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ငိုက်တာပဲ...
ကျောင်းက နယ်မှာနေတာလေ.. (မွန်ပြည်နယ်ပေါ့).. ရှုခင်းတွေက အရမ်း လှ.. တောင်ခြေနားဆိုတော့.. သစ်ပင်တွေကများ.. အရိပ်ကလည်းအရမ်း ကောင်းတာ.. အမေ့ကို ခြံထဲမှာစာဖတ်မယ်လို့ပြောပြီး ခြံထဲက ယာယီနားဖို့ လုပ်ထားတဲ့ တဲလည်းရောက်ရော.. ငိုက်တော့တာပဲ.. လေလေးကလည်း တဖြူးဖြူးနဲ့ ဆိုတော့လေ.. စာအုပ်ခေါင်းအုံးပြီး တခေါခေါနဲ့.. (သွားရည် တော့ မယိုဘူးနော်.. ကြိုပြောထားတာ) မေမေစိတ်ပူလို့ လိုက်လာရင် (သူ့ သမီးအကြောင်း သိတာကိုး).. ဆူခံထိပြီမှတ်...
ညဆိုလည်း ဒီလိုပဲ.. သင်္ချာတွက်ရင် စာရွက်နဲ့မတွက်ဘူး.. ကျောက်သင်ပုန်း နဲ့တွက်တာ.. (ကိုယ်က အကြံနဲ့လေ).. စာရွက်နဲ့တွက်လို့ မေမေက အသံမ ကြားရရင် လာလာချောင်းနေမှာစိုးလို့.. ကျောက်သင်ပုန်းကို တတောက် တောက်နဲ့ မြည်အောင်ခေါက်ရင်း ထိုင်ရက်ငိုက်နေတာ.. (မသိရင်တော့ စာ လုပ်နေတာပေါ့).. ဒါပေမယ့် မေကလည်း ဆရာမဟောင်းဆိုတော့ လည် တယ်လေ... တရေးနိုးရင် လာလာချောင်းတာ.. (အဲလောက်ထိ ယုံတာ.. အဟိ).. တောက်ခနဲဆို ခေါင်းက ပူထွက်သွားတာပဲ.. ကြည့်လိုက်တော့ မေမေ.. မိပြန်ပြီပေါ့.. မေမေကလည်း တတ်နိုင်သမျှတော့ ဖြည့်ဆည်းပေး ရှာပါတယ်.. lemon tea ယူမလား.. အချဉ်ထုတ်ယူမလား.. သံပုရာသီးယူ မလား.. အကုန်ဝယ်ပေးတယ်.. လက်ဖက်သုပ်ရောပဲ.. (မအိပ်ငိုက်ရင်ပြီး ရော)
ခက်တာက ကိုယ်ကလည်း ရာဇ၀င်နဲ့လေ.. သံပုရာသီးစားလို့ ချဉ်ပြီးယောင် လို့ မျက်စိမှိတ်မိရင် ပြန်မဖွင့်ချင်တော့ဘူး.. တခြားဟာတွေလည်း ထိုနည်း လည်းကောင်းပဲ.. အစာကုန်တာနဲ့ ငိုက်တာပဲ.. မျက်နှာသစ်တာလည်း အခါ ခါ.. ဒီနေ့ ၀အောင်အိပ်မယ်လေ.. မနက်ဖြန်ကစပြီး ကြိုးစားတော့ မယ်ပေါ့... အဲလိုနဲ့ ... မနက်ဖြန်တွေများပြီး စာမေးခါနီး.. စာမေးပွဲဖြေခါနီးမှ ကပ်လုပ် တာ.. (ဒီနေရာမှာ တပွဲတိုးဥာဏ်က မကောင်းပေမယ့် အကူအညီတော့ ဖြစ်သား)...
ကျောင်းမှာ Night Study လုပ်တော့လည်း ဒီတိုင်းပဲ.. သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး.. တယောက်တလှည့်... ခိုးအိပ်တာလေ.. (ခုံအောက်မှာ)..ကျန်တဲ့သူက ဆရာ တွေလာမလာ ကင်းစောင့်ရတာပေါ့... ဒါတောင် သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး အချဉ် သီးတွေ... အချဉ်ထုပ်တွေသယ်လာပြီး ... ရိက္ခာအပြည့်အစုံနဲ့... အိပ်ကြ တာ.. အဟဲ... ဆရာတွေ အားထားတဲ့ မျက်နှာမှ မထောက်နော်.... ဒါပေ မယ့် ဘယ်တတ်နိုင်မလဲလေ.. သူက ငိုက်တာကိုး...
ညဆို 11 နာရီ... 12 နာရီလောက်မှ အိပ်... မနက်ဆို...4နာရီထရပြီ... ကျောင်းက ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ ကပ်ရက်ဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ... အဲဒီချိန် ဆို မီးစက်နှိုးပြီ.. မျက်နှာသစ်.. သွားတိုက်.. စာကြည့်ကြရတာ... ဆရာတွေ လည်း ဒုက္ခခံရတာပါပဲ.. အရမ်းသနားဖို့ကောင်းတယ်... လစာလည်းပိုပြီး မရဘူး.. ကျောင်းသားတွေနဲ့ တူတူ ကျောင်းမှာ လာနေရတယ်.. တပည့်တွေ အိပ်မှ အိပ်ရတယ်... ကျောင်းသားတွေ ထရင် ထရတယ်... နားမလည်တဲ့ စာတွေဆို.. ရုံးခန်းကိုသွားပြီး.. ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအလိုက် ဆရာတွေ သွား ခေါ်ရှင်းပြခိုင်းရုံပဲ... တခါတလေမှသွားခေါ်ရတာပါ... အများသောအားဖြင့် ကျောင်းဝင်းထဲမှာ round လှည့်နေတတ်တာ.. လှမ်းခေါ်လိုက်ရုံပဲ.. ပျော်ဖို့ လည်း ကောင်းပါတယ်.... ညဆယ်နာရီဆို.. ကျောင်းသား မိဘတွေက.. အလှည့်ကျ လာကျွေးတဲ့ မုန့်တွေလည်း စားရသေးတယ်.... ( ပြောရင်းနဲ့ သတိရလာပြီ.. :(...)
သူတို့လည်း တပည့်တွေကို ပြန်သနားနေကြတာလေ.... ဆူလည်း မဆူရက် ပေမယ့်.. သူတို့မျက်နှာကို တမင်ပြင်ပြီး.. ဆူကြတာလေ.. တပည့်တွေ ကတော့ မျက်နှာငယ်နဲ့ပေါ့.. (ငိုက်ချင်ဦးဟဲ့).... ဆရာအဆူခံပြီး.. ဒုက္ခခံပြီး ခိုးအိပ်လိုက်.... အတင်းမျက်လုံးဖြဲပြီး စာကျက်လိုက်နဲ့.. စာမေးပွဲလည်းပြီး ရော.. မျက်လုံးက ညညဆို အိပ်မပျော်ဘူး.. (အကျင့်မကောင်းလိုက်တာ များ.. ကြည့်ပါဦး).. ခုချိန်ပြန်ပြောတော့ ရယ်စရာဖြစ်ရော.... ဆရာတွေနဲ့ တွေ့ရင်.. သူငယ်ချင်းအချင်းချင်းတွေ့ရင် အဲဒီတုန်းက အကြောင်းတွေ ပြန် ပြောပြီး ရယ်ကြ.... အဲဒီတုန်းက သူငိုက်တာက ဘယ်လို.. ငါခိုးအိပ်တာက ဘယ်လို.. ဆရာတွေက ဘယ်လိုပြောပြီးဆူတာနဲ့.. ပြန်ပြောပြီးရယ်ကြရော၊ ပြန်ပြောတိုင်းလည်း... ဆရာတွေ... သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အဲဒီအချိန်ကို သတိရ တယ်.. ဒုက္ခများပေမယ့်.. တကယ့်... မိသားစုလိုပဲ အရမ်းနွေးထွေးကြတာ... ဆရာ.. ဆရာမတွေက အဖေ အမေပေါ့ (တခါတလေ သူငယ်ချင်းလိုပဲ)... သူငယ်ချင်းတွေကတော့ မောင်နှမတွေလေ...
ကဲ... ကိုဂစ်တာကြီးရေ... ကျေပြီနော်... :) ဒီလို ပြန်နေတော့... :P :P :P
Posted by ရောင်ပြန် at 4:34 PM6ပဲ့တင်သံ
Posted by ရောင်ပြန် at 11:41 AM 10 ပဲ့တင်သံ
တချိန်က လွတ်လပ်မှုတွေကို သတိရမိတိုင်း
တချိန်က နွေးထွေးမှုတွေက အတွေးထဲနေရာယူတိုင်း
ငါ့ကို အဓိပ္ပါယ်အပြည့်နဲ့ ရှင်သန်စေတယ်.....
ငါ့ကို မျှော်လင့်ချက်နဲ့ အားပြည့်စေတယ်လေ...........
Posted by ရောင်ပြန် at 3:04 PM2ပဲ့တင်သံ
Posted by ရောင်ပြန် at 1:48 PM 8 ပဲ့တင်သံ
ဇူလိုင်လ ၁ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့....
မတောင့်မတ မကြောင့်မကြနဲ့ အေးချမ်းပျော်ရွှင်တဲ့ ဘ၀လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့........
ကည်နူးဖွယ် မွေးနေ့ရက်မြတ်လေး ဖြစ်ပါစေ ညီမလေးရေ... :)
ရောင်ပြန်ရဲ့ မွေးနေ့ကို ဆုတောင်းခွင့်မရတဲ့ လူတွေ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သန်းပေါင်းရာနဲ့ချီပြီး ရှိပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီတော့ ဆုတောင်းခွင့်ရတဲ့ လူတွေထဲမှာ ကျနော်ပါရတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါတယ်။
အထူးအထွေ မပြောတတ်တော့ပါဘူး။၁ရက်နေ့မှာ မွေးသလို လာမဲ့နှစ်မှာ အမြဲ နံပတ် ၁ ဖြစ်နိုင်ပါစေ။
ဒီနေ့ ၁၉ နှစ်တင်းတင်းပြည့်ပြီး နောက်ရက်တွေကျရင် အသက်နှစ်ဆယ်ထဲဝင်တဲ့ အပျိုမလေး ဖြစ်ပြီပေါ့နော်... ညီမလေး ဘ၀သာယာလှပ ပါစေ ရည်မှန်းချက် ရည်ရွယ်ချက်တွေ အောင်မြင်ပါစေ ဆုတောင်းပေးပါတယ်း) ကဗျာလေးရေးပေးချင်ပေမယ့် ခေါင်းက စဉ်းစားလို့မထွက်ဘူးညီမလေးရေရိုးရိုးလေးပဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်နော် ခွင့်လွှတ်ပါ
ဖေဖေနဲ့ မေမေ သို့
လောကထဲ လူလားမြောက်လာသူ သမီး
ရှိခိုးကန်တော့ပါရစေ မေမေ ..
လောကထဲ ရပ်တည်နိုင်သူ သမီး
ဖေဖေ့ကို ရှိခိုးကန်တော့ပါရစေ ဖေဖေ...
ကျေးဇူးရှင် ဖေဖေ နဲ့မေမေ
ဘ၀ရဲ့ အနှစ်သာရတွေ ပျောက်ဆုံးသွားမှာမို့
အခွင့်ရှိသမျှ အနားမှာနေခွင့်ပေးပါ အမေ။
ညီမလေး ရောင်ပြန်အတွက်... အမှတ်တရ
1.7.2009 တွင်ကျရောက်သော ငါ့ညီမရဲ့ ၁၉ နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် ပျော်ရွှင်သောဘ၀တွေကို အောင်မြင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ညီမရေ... ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့မင်္ဂလာဖြစ်ပါစေဗျာ.......။
ညီမလေး ရောင်ပြန် အတွက်
ညီမငယ်လေး ရောင်ပြန် မင်္ဂလာပါကွယ်။ အကို့ကိုမှတ်မိပါစ။ အကိုက ဖြိုးဝေတိုးပါ။ ညီမငယ်က ဇွန် ၁ မှာ ၁၉ပြည့်တာဆိုတော့ အကိုထက် ၁နှစ်နဲ့ ၅၅ရက်တိတိငယ်ပါတယ်ကွယ်။
ညီမငယ်လေးမွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ ဒုတိယအနေနဲ့ လူသားတယောက်ရဲ့ ကျင်ဝတ်တွေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ငါ့ဂုဏ်မချီတတ်တဲ့ အမျိုးသမီးကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါစေကွယ်။ နောင်လာမယ့် အနာဂတ်တိုင်းမှာ စိတ်ချမ်းသာမှုပြည်စုံတဲ့ အရိုးရှင်းဆုံးဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်
လူဘဝဆိုတာ တိုလွန်းလှပါတယ် ညီမငယ်။ အရာရာတိုင်းဟာ မမြဲဘူးလို့လဲ ဘုရားရှင်ကဟောခဲ့ပါရဲ့။ တခါသာတွေ့တွေ့ဆုံရတဲ့ ဟောဒီလူဘဝဆိုတာလည်း ထမင်းနဲပွဲတခုလိုပါပဲ။ ဝင်လာလိုက် ထွက်လာကြပါပဲ။ အဲဒီလိုဝင်ကြထွက်ကြရင်း ခင်ကျမင်ကျတာလဲထုံးစံပါပဲ။ အဲဒီနေရာမှာ တခုပြောလိုတာက သူငါရယ်လို့ မခွဲခြားဘူး လူတိုင်းကို သင့်သင့်မြတ်မြတ်စောင့်ထိန်းစေချင်တယ်။
လူဘဝဆိုတာ ရှင်တနေ့မွေးတနေ့ ဆိုတာ ညီမငယ်အသိပါ။ သေတဲ့အချိန်ဘာမှမပါသွားဘူးလေ။ ဘယ်လောက်ပဲစည်းစိမ်ဥစ္စာ၊ ဂုဏ်ဝါတွေရှိနေပါစေ မသယ်သွားနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ညီမငယ်ရဲ့ အမည်ကို သမိုင်းထွင်အောင်တော့ ရေးခဲ့လို့ရတယ်။ ပထမမိမိအတွက်၊ ဒုတိယမိသားစု၊ တတိယဆွေမျိုး၊ စတုတ္ထတိုင်းပြည်၊ ပဉ္စမ ကမ္ဘာ ဆိုပြီး ညီမငယ်ပြည့်စုံကြွယ်ဝလာတဲ့အခါ တတ်နိုင်သလောက် သူငါ၊ အယုတ်အလတ်၊ အဆင့်အတန်းမခွဲခြားဘဲ ကူညီစေချင်တယ်။ အဲဒီတော့ ညီမငယ်မှာ “ငါ့” ဆိုတာတွေဘေးဖယ်ပြီး အတ္တစိတ်ကင်းကွာနေသင့်တယ်။ နောက်ပြီးအတ္တစိတ်ကိုမရှိအောင်ထားရင် လောဘမီးက ငြိမ်းအေးသွားမှာပါကွယ်။
ဘဝဆိုတာကိုဆက်ပြောရမယ်ညီမငယ်။ ဘဝဆိုတာ အဆိုးနဲ့ အကောင်း ဒွန်တွဲနေတယ်။ အဲဒါတွန်းလှန်နိုင်မှာမဟုတ်ပဲ။ အကောင်းကိုရင်ဆိုင်ချင်သလို အဆိုးကိုလဲ ရင်ဆိုင်ရဲရမယ်။ ညီမငယ်အနေနဲ့ လဲကျမှာကို ကြောက်နေမှာပဲ။ ဒါပေမယ တခုသတိထားစေချင်တာက ညီမငယ်ခဏခဏလဲကျဖန်များလာရင် နောင်ကျရင်ဘယ်လိုထရမလဲဆိုတာ သိလာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့ အဆိုးဆိုတဲ့ အကြောင်းတရားများတွေ့ရင် ရှောင်ဝှိုက်မသွားပါနဲ့။ ပညာနဲ့ယှဉ်ပြီးရင်ဆိုင်ပါ။ နောက်ပြီးဘဝဆိုတာ တဘဝထဲမှာတောင်မတည်မြဲဘူး။ ဒီနေ့ကောင်းနေပေမယ့် နောက်နေ့ဆိုးချင်ဆိုလိမ့်မယ်။ ဗုံလုံတလှည့် ငါးပျံတလှည့်ပဲ။ အဲဒီတော့ နောက်နေ့ဘာဖြစ်မလဲမသိတဲ့ဘဝမှာ မုန်တိုင်းတခုများထန်လာရင် အဆင့်သင့်ဖြစ်အောင်တွေ့အကြုံများများယူသင့်တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲဆိုရင်တော့ ညီမငယ် ဘယ်လိုမျိုးပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ် မရှောင်လွှဲပါနဲ့၊ အဲဒီကနေအတွေ့အကြံရယူပါကွယ်။ မသိတဲ့ကိစ္စတွေကို လေ့လာပါ၊ မစူးစမ်းပါနဲ့။ စာတွေ့ အတွေ့အကြုံတွေကိုလိုက်လံမှတ်သားထားပါ။ နောက်ထပ်လဲအများကြီးရှိပါတယ်။ ညီမငယ်တွေ့ကြုံလာမှာပါ။
ညီမငယ် ဆက်ပြောနေရင်စာအရမ်းရှည်မှာဆိုးတယ်။ အဲဒီတော့ အောက်က ကဗျာလေးနှစ်ပိုဒ်ထဲမှာ အကိုပြောချင်တဲ့ အကြောင်းတွေအကုန်ပါပါတယ်။ ညီမငယ် အဲဒီအတိုင်းကျင်သုံးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်မိတယ်။
အကိုပြောချင်တာတွေအကုန်ပါလို့ အသစ်ရေးရင် မကာမိမှာဆိုးလို့ ညီမငယ်အတွက် အသစ်မရေးပေးမိတာကို စိတ်မညိုပါနဲ့လို့လဲတောင်းပန်ပါတယ်ကွယ်။
ငိုလိုက် ရီလိုက် ပြုံးလိုက် ပျော်လိုက်
အရာရာကို အသိနဲ့ တသိ ယှဉ်ကပ်ပြီး
မကြာ အကျွန်တို့ သေရဦးမည်
ထိုမှ တဖန် သင်လျှံလာသော်၊
ပထမနေရာ ထားသင့်လျှက်ခါ လှူဒါန်းရာ၏။
ပညာလျှံစေ သင့်ရာတွေးသော် ဒုတိယနော်၊
ထိုတင်မက ဝမ်းမီးချုပ်ရေး စားဝတ်ဆေးပေး
ညီမငယ် အဲဒီကဗျာနှစ်ပိုဒ်နဲ့အညီ ကျင့်သုံးနိုင်ပါစေလို့ နောက်ဆုံးအနေဆုတောင်းပေးပါတယ်။ “မိမိသာလျှင်မိမိ”ဆိုတဲ့စကားကိုလက်ဆောင်ပါးရင်း စကားအဓိပ္ပာယ်ကို နားလည်အကျိုးရှိစွာ တနေရာမှာ အသုံးချမိခဲ့ရင်လည်း အကိုကိုသတိရမိပါလို့ကွယ်။
July 1, 2009 5:30 PM
July 1, 2009 6:48 PM
July 1, 2009 7:17 PM
July 2, 2009 4:49 AM
July 2, 2009 12:10 PM
July 2, 2009 6:24 PM
July 3, 2009 3:54 PM
July 3, 2009 6:56 PM
July 4, 2009 12:20 AM
July 5, 2009 9:13 PM
July 6, 2009 5:54 AM
ဖော်ပြဖို့ ကျန်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင် ကွန့်မန့်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် စီဘောက်မှာဖြစ်ဖြစ် မေးလ်ကနေဖြစ်ဖြစ် သတိပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်.. ကျေးဇူးပါ...
Posted by ရောင်ပြန် at 10:35 AM4ပဲ့တင်သံ